Maraykanka & K. Koofureed oo bilaabay carbiskii militari ee ugu weynaa abid – Kasmo Newspaper
Maraykanka & K. Koofureed oo bilaabay carbiskii militari ee ugu weynaa abid
Updated - December 4, 2017 8:36 am GMT
London (kasmo), Ciidammada Maraykanka iyo Kuuriyada Koofureed ayaa, maanta oo Isniin ah, 4 Disembar 2017, bilaabay carbis military oo wadajir ah midkii ugu weynaa taariikhda ciidammada cirka 2da dal, oo ay ka qaybgalayaan boqollaal diyaaradood iyo 20 meeyo nooca Radarka ka dhuunta.
Wasaaradda Gaashaandhigga Kuuriyada Koofureed ayaa caddeysay in hawlgallada dhanka cirka ee Gacanka Kuuriya oo loogu magac daray “Vigilant Ace” socon doonaan 5 maalmood, looguna talagalay in sare loogu qaado awoodda dagaal iyo diyaargarowga bahwadaagta.
Maraykanka waxaa uga qaybgalaya qiyaastii 12,000 oo askari iyo diyaarado dagaal oo ay ka mid yihiin 6 nooca F-22 iyo 18 nooca F-35 “Stealth” ee Raadarka ka dhuunta. Guud ahaa 230 diyaaradood ayaa ka soo kici doona ilaa 8 saldhig iyo xarumo kale oo Kuuriyada Koofureed iyo Maraykanku ku leeyihiin koofurta dalka.
Carbiskan wadajirka ah ayaa ku soo beegmaya toddobaad ka dib markii Kuuriyada Woqooyi tijaabisay gantaalkeedii ugu awoodda weynaa, “Hwasong-15, oo nooca ICBM (Intercontinental Ballistic Missile), kaas oo la sheegay in uu gaari karo xeebaha bariga ee Maraykanka.
Kuuriyada Woqooyi ayaa cambaaraysay carbiska wadajirka ah, iyada oo qoraal lagu baahiyay wargayska Rodong Sinmun ee Xisbiga Shuuciga lagu tilmaamay daandaansi, daqiiqad kasta, keeni kara dagaal Nuklear ah.